अनसन घोषणा गरेका डा. केसीलाई डा. शशिको खुल्ला पत्र ! – Nepali Health
अनसन घोषणा गरेका डा. केसीलाई डा. शशिको खुल्ला पत्र !
२०७३ असार २० गते १९:५२ मा प्रकाशित
मित्र गोविन्द केसी ज्यू,
अनसन श्रृङखलाको नयाँ भाग फेरी केही दिनमा सुरु हुनसक्ने हजुरको घोषणा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट थाह पाएँ । सञ्चारमाध्यमबाटै यो पटक अनसन बस्नु पर्नाको कारण पनि थाह पाएँ । तर अचम्म लागेन । किनकी अनसन तपाईँको प्रयाय बनिसकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन सुरु गरेको अहिले ढाई तीन बर्ष वितिसक्यो । त्यसयता अनसन बस्ने र तोड्ने श्रृङखलाको पनि सातौँ आठौँ भाग पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ । यसबीच तपाँईले उठाएका पुराना माग कति पुरा भए वा भएनन् त्यो त जगजाहेर नै छ तर हरेक पटक नयाँ नयाँ फण्डा ल्याएर अनसन सुरु गरिहाल्नु हुन्छ । तपाईँको यो खुबिलाई भने मान्नै पर्छ ।
डा. केसी !अनसन बस्ने वा नबस्ने त्यो हरेक व्यक्तिको अधिकारको कुरा मानिएला । त्यो मानेमा तपाँई जतिपटक अनसन बस्न पनि पाउनुहुन्छ । अनसन बस्ने तपाईँको अधिकार छ । तर तपाईँ जत्तिको विद्धानले आफ्नो अनसनले अरुको अधिकारमा दख्खल पुगेको छ कि भन्नेमा कम्तीमा हेक्का राख्नै पर्छ । जुन यसअघिका कुनै अनसनमा देखिएन ।
यसअघिका अनसनले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको पटक पटक हरण भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर किटान गरेको अस्पताल जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई तपाईँले आफ्नो अनसनस्थल बनाउदै आउनुभयो । तपाईँकै कारणले पटक पटक अस्पतालको सेवा ठप्प भयो । हजारौँ विरामी तथा लाखौँ जनता त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मारमा परे र अस्पताललाई करोडौँ आर्थिक व्ययभार भयो ।अस्पतालमा उपचारका लागि गएको बखत सेवा नपाउँदा विरामी र तिनका आफन्तलाई पर्ने मानसिक तनाव त झन कति हो कति ।
डा. केसी ! धेरैलाई थाह नहुनसक्छ , तपाईँ र म संगै पढेका साथी पनि हौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै तपाईँले थालेको अनसनको पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खलामा म आफै पनि तपाईँको साथमा थिएँ । र तपाँईकै मुख्य डाक्टरको रुपमा काम गरेकै हुँ । त्यतिवेला तपाईँले मलाई इमान्दार बरिष्ठ डाक्टर भनेर सबैको अगाडी प्रसंशा समेत गर्नुहुन्थ्यो । तर केही समय पछि म नै तपाईको सबैभन्दा तारो बन्न पुगेँ । माफियाको मतियार बनेँ, कनिष्ठ बनेँ, त्यसबाहेक दर्जनौँ विशेषण प्रयोग गर्दै मेरो व्यक्तित्व लगातार आक्रमणमा परेँ । कारण तपाईँको निगाहमा डीनमा नियुक्ति भएको थिइन्, त्रिविको नियम कानून अनुसार नियुक्ति भएको थिएँ ।
खासमा म सुरुको तपाईँकै सहयोगी थिएँ । तर हरेक पटक असरल्ल माग अघि सार्ने, त्यसको राम्ररी सम्वोधन नहुँदै छाड्ने र फेरी अर्को अनसन थालिहाल्ने तपाईँको स्टायल मन नपरेर म बाहिरिएको हुँ । तर पाँचौ श्रृङ्खलामा आइपुग्दा तपाईँको अनसनको मुख्य तारो नै मै हुन् पुगे । मलाई लाग्छ तपाईँको अनसनको पहिलो देखी अहिलेसम्म प्राप्त एक मात्रै र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलव्धी भनेको नै मलाई गैरकानूनी रुपमा हटाउनु भयो ।
तर पाँचौ श्रृङ्खलामा आइपुग्दा तपाईँको अनसनको मुख्य तारो नै मै हुन् पुगे । मलाई लाग्छ तपाईँको अनसनको पहिलो देखी अहिलेसम्म प्राप्त एक मात्रै र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलव्धी भनेको नै मलाई गैरकानूनी रुपमा हटाउनु भयो ।
डा. केसी ! तपाईँले आफ्नो अनसनको माग तथा उपलव्धी कत्तिको समिक्षा गर्नु भएको छ ? तर तपाईँका हरेक पटकका अनसनका माग र प्राप्त भएका भनिएका उपलव्धीहरुको मैले आफ्नो तर्फबाट लेखाजोखा गरेको छु । तपाईँले हरेक पटक तीन करोड जनताको लागि भन्दै गरिएको अनसनले न चिकित्सा शिक्षामा परिवर्तन भएको छ न त जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा । परिवर्तन भएको छ त केवल तपाईँको परिचय । लगातारको अनसनले तपाईँ एउटा सेलिब्रेटी डाक्टर हुनुभएको छ त्यत्ति हो ।
डा. केसी ! तपाईँले हरेक पटकको अनसनमा तीन करोड जनताको नाम लिनुहुन्छ । अनि उपचारका लागि अस्पताल आएका विरामी र तिनका आफन्तसंग माफी माग्नुहुन्छ । के सधैभरी विरामी र तिनका आफन्तसंग माफीमागेर अस्पताललाई बन्धक बनाउन पाइन्छ ? सेवा ठप्प पार्न पाइन्छ ? हरेक पटकको अनसनमा अस्पतालको सेवा बन्द गराई पुरा गरिने माग ब्ल्याक मेलिङ होइन् ? तपाईँ भन्नुहोला आन्दोलनको बेला यस्तो हुन्छ । तर यो आन्दोलन एक पटक दुई पटकको होइन, पटक पटक अढाई तीन बर्ष देखि चल्दै आएको आन्दोलन हो । त्यो पनि अस्पताललाई ढाल बनाएर गरिएको लज्जास्पद आन्दोलन् ।
डा. केसी ! चिकित्सा शिक्षाका लागि भनिएका तपाईँका आन्दोलन व्यक्तिमा केन्द्रीत भयो । कसैको स्वार्थमा केन्द्रीत भयो । कसैबाट परिचालित भए जस्तो पनि देखियो । यसमा मलाई दुख लागेको छ । दुख यसमा लागेको छ कि तपाईँले गरेको अढाई बर्षे आन्दोलनले आइओएम वा शिक्षण अस्पतालले यो पायो, देशले यो पायो, वा जनताले यो पायो भनेर गर्बसाथ भन्ने दिन अझै आएन् ।
तपाईँ चिकित्सा शिक्षा आमुल सुधार र तीन करोड जनताका लागि भन्दै पटक पटक अनसन बस्नुभयो तर यो अवधीमा तपाईँ हामी कार्यरत यो शिक्षण अस्पतालमा कुनै सुधार आएन् । न फ्याकल्टीमा सुधार आयो । न ल्यावमा सुधार आयो । न अस्पतालको उपकरणमा सुधार आयो । न डाक्टर थपिए न त विरामीले अनसन पछि सहज सेवा पाए ।
त्यति मात्रै होइन मलाई हटाएर तपाईँले रोजेर ल्याएका बरिष्ठ पदाधिकारीले न आइओएमलाई कायापलट गर्न सके न त अस्पताललाई नै । बरु अनसन सुरु हुने भन्दा अघिको अवस्थामा समेत धमिल बनायो ।बरिष्ठ र कनिष्ठको रुपमा फाटो ल्याउने काम गरयो । राजनीति घुसाउने काम गर्यो । मै आफैलाई समेत तपाईँले कनिष्ठको दर्जा दिलाईदिनुभयो । नेतृत्वका लागि भिजन र योग्यता वा सक्षमता होइन् तपाईको अनसन कपाल फुलाउनै पर्ने र छाला चाउरी नै पार्नुपर्ने योग्यता तोकिदियो । र त्यो खालको योग्यता कति प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने पनि देखियो ।
नेतृत्वका लागि भिजन र योग्यता वा सक्षमता होइन् तपाईको अनसन कपाल फुलाउनै पर्ने र छाला चाउरी नै पार्नुपर्ने योग्यता तोकिदियो । र त्यो खालको योग्यता कति प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने पनि देखियो ।
मलाई के लाग्छ भने सुधार आफूबाट नै हुनुपर्छ । तपाईले पनि आफैबाट सुधार गर्ने हो देशकै चिकित्सा सेवा वा क्षेत्र बदल्न हिडेको व्यक्तिले पहिले आफै कार्यरत संस्थालाई सुधार्नु पर्छ कि पर्दैन् मेरो प्रश्न हो यो ।
डा. केसी ! अनसनले अस्पताल तथा आईओएमलाई जे जति विकृत बनाएपनि तपाईँलाई घाटा भएको छैन है । अनसनले तपाईँलाई सुप्रिमेसी बनाइदियो । हरेक निर्णयमा त्यहाँ नीति नियम कानून हेरिदैन डा. केसीले के भन्छन् भन्ने अवस्थामा पुग्यो नियमक निकायहरु पनि । यसले तपाईँलाई त फाइदा होला तर विधिको सासन मान्नेहरुलाई भने ठुलो झडका दिएको छ । तपाईँले योग्य भने योग्य हुने , तपाईँले तस्कर भने तस्कर हुने वा माफिया भने माफिया हुने परिपाटी आएको छ । तर यसले पनि कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ । नियम कानूनलाई धोती लगाइदिएको छ ।
अनसनले अस्पताल तथा आईओएमलाई जे जति विकृत बनाएपनि तपाईँलाई घाटा भएको छैन है । अनसनले तपाईँलाई सुप्रिमेसी बनाइदियो । हरेक निर्णयमा त्यहाँ नीति नियम कानून हेरिदैन डा. केसीले के भन्छन् भन्ने अवस्थामा पुग्यो नियमक निकायहरु पनि । यसले तपाईँलाई त फाइदा होला तर विधिको सासन मान्नेहरुलाई भने ठुलो झडका दिएको छ । तपाईँले योग्य भने योग्य हुने , तपाईँले तस्कर भने तस्कर हुने वा माफिया भने माफिया हुने परिपाटी आएको छ । तर यसले पनि कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ । नियम कानूनलाई धोती लगाइदिएको छ
कानून बमोजिम त्यतिवेला म डीन नियुक्त हुँदा तीनवटा मुख्य एजेन्डा सारेको थिएँ । आइओएमलाई विश्वविद्यालयमा लैजाने, शिक्षण अस्पताललाई सुपरस्पेस्यालिटीमा रुपान्तरण गर्ने र एमडी एमएस निशुल्क गर्ने । डीन भएको तेस्रो दिनमै मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर भिजन प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहि माग तपाईँका पनि थिए तर न मलाई काम गर्न दिनुभयो न त तपाईँले नै ति काम गर्न सक्नुभयो ।
अन्तमा डा. केसी ! फेरी पनि अनसनको घोषणा गर्नुभएको छ । विगतका भन्दा यसपटकको माग पनि अलि बेग्लै छ । यी मागहरु आइओएम र त्रिविले पुरा गर्ने भन्दा पनि राज्यका निकायले गर्ने खालका हुन जस्तो लाग्छ ।
मैले त सकेसम्म यस्तो अनसन नबस्नु नै भन्ने हो । यदि बस्नु हुन्छ भने तपाई पनि कुनै सार्वजनिक स्थल रोज्नुस् । यसपटक अस्पताललाई बन्दी नबनाउनुस् । व्यक्तिकेन्द्रीत र निकाय केन्द्रीत माग राखेर अस्पतालमा अनसन बसी सेवा प्रभावित गर्नु नितान्त गैरकानूनी कुरा हो ।
-उही तपाईँको भलो चाहने मित्र
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ
नेपाली हेल्थसंग जोडिनका लागि लाइक गर्नुहोस हाम्रो फेसबुक पेज । सो पेजमा जानका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
दश वर्षीय बालकको तौल एक सय ९२ किलोग्राम !